डा. शंशाक कोइरालाले पठाए नवलपुरमा स्वास्थ्य समाग्री, प्रत्येक स्थानीय तहमा पुर्याइने
By administrator on	 April 22, 2020 कोरोना अपडेट, देश, फोटो फिचर, स्थानीय
कावासोती । नेपाली कागँग्रेसका महामन्त्री एवम् नवलपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद प्रा.डा. शशांक कोइरालाले नवलपुरका स्थानीयतहरुलाई स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउनुभएको छ । विजय एफएमको विजय विशेषमा कुरा गर्दै डा. कोइरालाले पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान गर्ने बताउनुभएको थियो । सोही अनुरुप आज स्वास्थ्य समाग्री प्रदान गरिएको छ । कोरोनाको संभावित जोखिम नियन्त्रणका लागि सहज होस् भनि स्वास्थय सामाग्री उपलब्ध गराएको डा. कोईरालाका स्वकीय सचिव भरत तिवारीले बताउनुभयो ।
बुधबार जिल्ला प्रशाशन कार्यालय नवलपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेलाई स्वास्थय सामाग्री हस्तान्तरण गरिएको हो । जिल्ला प्रशाशन कार्यालय मार्फत ति सामाग्रीहरु स्थानीय तहरुमा पुग्नेछन् । स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण गर्दे नेपाली काँग्रेस नवलपुरका सभापती एवम् गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य बिष्णु प्रसाद लामिछानेले डा. कोईरालाले उपलब्ध गराएको स्वास्थय सामाग्रीले नवलपुरका स्थानीय तहरुलाई केहि मात्रामा भएपनि कोरोना रोकथामका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सो अबसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले संघिय सांसद मार्फत आएका स्वास्थय सामाग्रीहरुले जिल्लाका स्थानीय तहरुलाई महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा सघाउ पुग्ने बिश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
डा. कोईरालाका स्वकीय सचिव तिवारीका अनुसार नवलपुरका आठ वटा स्थानीयतहरुका लागि डा कोईरालाले एन ९५ मास्क ७५ थान , सेनिटाइृजर ८० लि. , पिपिई ६० थान , थर्मल गन १७ थान , ग्लोभ्स ५०० सेट र मेडिकल मास्क २७५० थान उपलब्ध गराउनुभएको छ । जिल्लामा अन्य थप स्वास्थ्य सामाग्री आबश्यक परेको खण्डमा फेरी पनि त्यस्ता सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन तयार रहेको तिवारीले बताउनुभयो । स्वास्थय सामाग्री हस्तान्तरण गर्न गण्डकी प्रदेशसभाका प्रमुख विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली , संघिय सांसद सत्यनारायण खनाल , प्रदेश सांसद ओमकला गौतम , संविधानसभा सदस्य महेन्द्रध्वज जि.सि. लगायका नेताहरु जिल्ला प्रशाशन कार्यालय पुगेका थिए ।
News : सत्यकलमको सहयोगमा